ရွာသူရွာသားတို့အတွက် စကားလက်ဆောင်“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာသူရွာသားတို့အတွက် စကားလက်ဆောင်“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား”
ရွာသူရွာသားတို့အတွက် စကားလက်ဆောင်“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား”
Posted by padonmar on Oct 23, 2011 in Creative Writing | 43 comments
ဒီနေ့ကျွန်မ မြို့နယ်အသင်းမိတ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခု သွားတက်ပါတယ်။
အသင်းလက်ရှိဥက္ကဌမှ နောင်မျိုးဆက်သစ်လူရွယ်လူလတ်တွေကို မြို့ရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်ပါဝင်ကြဖို့
ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ဧည့်ခံပြီး လက်ကမ်းကြိုဆိုတဲ့ပွဲလေးပါ။
အဲဒီပွဲမှာ နာယက၊ဥက္ကဌ နဲ့ အတွင်းရေးမှူးတို့ ပြောကြတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေထဲက အများကြားဖူးနေပေမယ့်
ဒီလိုအချိန်မှာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်မယ်ထင်တဲ့ စကားလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။
နာယက အငြိမ်းစားဆရာကြီးက ဆယ်တန်းမြန်မာစာမှာ ပြဌာန်းတဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာထဲက တစ်ပိုဒ်ကိုရွတ်ပြသွားတာ ကျွန်မတို့ မျက်ရည်တောင်ဝဲမိပါတယ်။
ကဗျာလေးက အားလုံးသိကြတဲ့ “သင်သေသွားသော်”ပါ။
ဆရာကြီးက စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု စာပေဟောပြောပွဲမှာ ပြောသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး ဆက်ရွတ်ပြပါတယ်။
(သူပြောသွားတာကတော့ ဆရာမကြီးက လူငယ်တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာသာတွေ့နေရပြီး စာကြည့်တိုက်တွေ၊ နိုင်ငံ့အရေး ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မတွေ့ရတော့တာ အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး
1931 ဧပြီလ မှာ မစ္စတာ နေရူးနဲ့ သူ့သမီး အင်ဒီရာတို့ လာတဲ့အချိန်က လူတစ်သောင်းလောက် ဒို့ဗမာသီချင်းကို သံပြိုင်ဆိုပြီး ဧည့်ခံတာ အားရလွန်းလို့ “On your attitude, I assure you will get Independence very soon “ လို့ ချီးကျူးခံရတဲ့မြို့
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ၁၃၀ဝ ပြည့်ရေနံမြေသပိတ်မှာ ဒီမြို့လိုမြို့မျိုး ဗမာပြည်မှာ ၁ဝ မြို့သာရှိရင် လွတ်လပ်ရေးကို အစောကြီး ကတည်းက ရပြီးပြီ လို့ ချီးကျူးခံရတဲ့မြို့ ၊
“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” ပါတဲ့။)
ဒီစကားတွေဟာ အဲဒီမြို့သေးသေးလေးက လူငယ်တွေသာမက အားလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်လို့ ကျွန်မတော့ယူဆပါတယ်။
နောက်ပြီး အတွင်းရေးမှူး ဖတ်ပြသွားတဲ့ ဥက္ကဌ အဆက်ဆက်ရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းလေးတွေထဲက ဥက္ကဌ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဦးတင် အကြောင်းလေးလည်း ဖောက်သယ်ချချင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဦးတင်ဟာ မေ့ဆေးအထူးကုပါ၊အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford University က ဘွဲ့ရပြီး အင်္ဂလန်မှာ ဆေးရုံအုပ်လုပ်နေပါတယ်တဲ့။ သူဟာ Oxford football အသင်းလက်ရွေးစင်ပါ ။တင်းနစ်လဲတော်ပါတယ်တဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အင်္ဂလန်သွားတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ တွေ့တော့ လွတ်လပ်ရေးရရင် ခင်ဗျားတု့ိလိုလူတွေ
တိုင်းပြည်အတွက် အများကြီးလိုပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီး အမှုထမ်းတာ
အသက်ထက်ဆုံးပါ၊ အသင်းဥက္ကဌအဖြစ်နဲ့ မြို့နယ်အကျိုးလည်း တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်သွားပါတယ်တဲ့။
ကျွန်မတို့ လည်း ဒေါက်တာဦးတင်တွေ မျှော်နေပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ဒေါက်တာဦးတင် လို
ဟိုတုန်းကဒေါက်တာတွေ ပီအိပ်ချဒီကို ပထမရပြီးအောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေပြန်လာဘူးပါတယ်။
ပညာရှင်ဆိုတာသူ့ပညာကိုသုံးခွင့်မရရင် “သေ” နေတာနဲ့မထူးဘူးလေ။
ဘယ်လိုမှ ဘာမှလုပ်လို့ မဖြစ်လို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ ကျနော်သိတဲ့ဆရာတွေအများကြီးပါ။
နဲနဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေလို့ (လောလောဆယ်)ဆရာ ဒေါက်တာမောင်မြင့်နဲ့ ဆရာအောင်ထွန်းသက်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတာဘဲလေ။။
သူတို့လို လူမျိုးတွေက အိုဗာစီးမှာစာသင်စားရင်တောင် တလ ယူအက်စ် ၅၀၀၀-၁၀၀၀ဝကြား လောက်ကိုဘယ်မှာလုပ်လုပ်ရနိုင်တဲ့ဆရာတွေလေ။ငွေရေးကြေးရေးအတွက်မြန်မာမှာနေတာမဟုတ်တာတော့သေခြာတယ်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ဆို လွယ်အိတ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးလွယ်ပြီးတော့ လူငယ်တွေအတွက် ဟောပြောပွဲတွေ လိုက် ပြောပေးနေတာ လေးစားစရာပါ။
လူအို လူဟောင်း အတွေးအို အတွေးဟောင်းတွေကြားမှာ
လူငယ် လူသစ် အတွေးသစ် အတွေးဆန်းတွေကို နေရာပေးမှ
လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမှ လက်တွဲခေါ်မှ ခေတ်က မညံ့မှာပါ။
ဒို့ခေတ်မှာ မညံ့ရလေအောင် ဒို့ရှေ့ကလူတွေက နေရာဖယ်ပေးမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမှ
ဒို့ ခောတ်ရောက်မှ ညံ့ရာတော့ မကျချင်ပါဘူး…။ ဒါပေမဲ့ အစစအရာရာ လွဲချောနေတဲ့ ခေတ်ကြီးကိုတော့ မပေးပါနဲ့လို့ ပြောပါစေ…။ အတတ်ပညာ ညံ့ဖျင်း အလုပ်အကိုင် လွဲချော အစဉ်အလာ ထုံးစံတွေကို ဆန်းစစ်ခွင့် မရတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လူငယ်တွေ မွန်းကြပ်နေကြောင်းပါ…။
ကိုပေါက် နဲ့ အဘနီ၊
တော်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ လူကြီးတွေ ပေါများတဲ့ ဒို့မြန်ပြည်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါကြောင်း
(မှန်တာပြောရရင် ကိုယ်ကိုတိုင်နဲ့ကိုယ့်ခေတ်က နည်းနည်းညံ့နေတယ်လို့လည်း ခံစားမိလို့ပါ)
လဘက်ရည်ဆိုင်မှာလေကန်သူတွေ၊ဂိမ်း ကစားတဲ့တွေပေါ နေသလားလို့၊
ဂိမ်းဆိုတာ မစမိမှ၊ စမိရင်ဖြတ်ဘို့နဲနဲခက်တယ်။
three colors ရေ
ဘာမှလုပ်လို့မရရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အမှိုက်ကောက်ပေးလို့ရသေးတယ်လေ။
ဂိမ်းနဲ့ ကိုရီးယားကား ရောဂါတူတူဘဲ။ရောဂါမရင့်ခင်ဖြတ်နိုင်မှ။
အမှိုက်ကောက်ပေးဖို့ထားပါဦးဗျာ..အခု များတချို့လူတွေမြင်ပုံက စည်းကမ်းရှိရှိ.နဲ့..အမှိုက်ပုံးထဲကို.ပစ်နေတဲ့လူကိုုတောင်.စိတ်ရူးပေါက်တဲ့လူ လို့ထင်တတ်သေးတာဗျာ.လူငယ်တွေနိုင်သလောက်လုပ်ပြပေမဲ့လည်း..
နောက်ဆုံးမတော့လည်း ရွှေပြည်တော် ကြီးကတော့ မျှော်ပေမဲ့လည်း..ဝေးယောင်ယောင်ပါပဲ..
သူနဲ့ တွေ့တော့ လွတ်လပ်ရေးရရင် ခင်ဗျားတု့ိလိုလူတွေ
တိုင်းပြည်အတွက် အများကြီးလိုပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက်
ဂွ ပြောတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါ ။
မြင်မိတာလေး တစ်ခုတော့ ဝင် ပြောပြပါရစေ ။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာဦးတင် ကို
Personally ပြောပြီး ဖိတ်ခေါ်တာကလည်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လိုခေါင်းဆောင်ကိုး ခင်ဗျ ။
ယုံလောက်စရာလူ ခေါင်းဆောင် မို့လဲ
ပြန်လာတာကိုး ခင်ဗျ ။
” စက်လှေတွေ Weather မကောင်း လို့ မထွက်နိုင်တာပါ အဘ ”
လို့ ရှင်းပြတာကို ကျေးဇူးရှင်ကြီးက
” Weather မကောင်းရင် Weather ပြင်ပြီးထွက်ပေါ့ ”
ဆိုပြီး အထက်ကနေ စီစဉ်ညွှန်ကြားပေးနေတဲ့
Super Super ငတုံး ငဒူ ကြီး တွေရဲ့ အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရတယ့်
” သေသော်မှသည် အော်ကောင်း၏ ” ပါပဲ ။
ထွက်ပြေးကြတဲ့ လူတွေကို အပြစ်မြင်စရာ မရှိပါဘူး ။
အရင် Super Super ငတုံး ငဒူ ကြီး တွေမဟုတ်တာ
သေချာရဲ့လား ခင်ဗျ ။
ခဲက ခဏခဏ မှန်နေတော့
အပြစ်မတင်ကြပါနှင့် ခမျ ။
အန်ကယ်ဖော ကတော့ ဆော်လိုက်ပြန်ပဟ …
ထိ ချက်ကလဲ တိန် ကနဲ ပဲ ….
စူပါလဒူကြီးတွေ အတွက် တခြားနာမည်ရှိသေးတယ်ဗျ ..ဘာတဲ့
Very Ignorant Persons ဂျီးဒွေ ခစ်ခစ်…..
သူများလုံအောင်မထိုင်တာ အပြစ်မပြောကြတော့ဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံအောင် ဒို့သားအဖ ပြင်ထိုင်ကြစို့လား။
ကျွန်မ အပြင်ကလူတွေကို အပြစ်မမြင်တာ FR အသိပါနော။post တောင်ရေးပြီးပြီဘဲ။
ကျွန်မကတော့ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးကိုမျှော်မှန်း ၊အဆိုးတွေအတွက်လည်းစိတ်ကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ခံယူထားပါတယ်။
အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုများနဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ဓတ်စုစည်းမှု နဲ့ဘဲ စကြရုံပါ ပြီးခဲ့တာတွေဝေဖန်နေမဲ့အစား မြင်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပဲ လုဎ်သင့်တာကစလုဎ်(လက်လှမ်းမီသလောက်) စဉ်းစားကြ အားတင်းလုဎ်ဆောင်ကြပါစို့လား
လာချင်လျှင် အနီးလေး ၊ မလာချင်လျှင် ခရီးဝေး။
:grin: :smile: ::sad: :shock:
“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” ဆိုတော့ ခေတ်နဲ့လူနဲ့ ခွဲပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
လူတွေကိုတော့ မညံ့ကြပါဘူးလို့ ဆိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တဲ့လူတွေ အများကြီး အပြင်ရောက်သွားကြတာပဲရှိပါတယ်။ (အထဲကလူတွေကို ညံ့တယ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။)
ပညာတတ်ဆိုကတည်းက ငွေ ထက် လူလေးစားခံရခြင်းကို
အရိုအသေ ပေးပြီး သူတို့ညွှန်ကြားတာတွေ
(ပွားတာတွေ) ကို နားထောင်ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်မိပါတယ်ဗျာ။
ဒီမှာက တကယ်ဘာမှ မတတ်ပဲ ညွှန်ကြားသူတွေ ရှိနေတော့
အညွှန်ကြားခံ လူသားအဖြစ်နဲ့ ပြန်လာမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်မကတော့ ခပ်ညံ့ညံ့အမျိုးအစားထဲမှာပါလို့ ဒီပို့စ်ကို ဝင်မဆွေးနွေးနိုင်သေးဘူး … သိပ်တော်ပြီး နိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတဲ့ ကျွန်မဆရာကို ခြေဖျားတောင်မမှီပဲနဲ့ သူ့တာဝန်တွေကို ထမ်းနေတော့ အခုလက်ရှိ ကျွန်မတို့ဌာနက အသုံးသိပ်မကျတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ပဲဖြစ်နေတာ (ကိုယ်တွေ့) ….
မဝေတို့နှစ်ကပဲလား ဒါမှမဟုတ် တနှစ်နောက်ကျလား သေချာတော့ မမှတ်မိဘူး။ ကျွန်မ အစ်ကို ပြောပြတာပါ။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် အကြောင်းပါ။ တရုပ်အင်ဂျင်နီယာ ဆွဲတဲ့ တံတားဒီဇိုင်းက ဟာကွက်တွေကို အတိအကျ ထောက်ပြတယ်တဲ့။ ဒါကို လူကြီးက ဘာလို့ထောက်ပြတာလည်း ခေါ်ပြောလို့ စိတ်နာပြီး နိုင်ငံခြား အပြီး ထွက်သွားတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ သူပြောတာတွေက အမှန်တွေပါတဲ့။ သူက မြို့ပြအင်ဂျီနီယာဘာသာမှာ နှစ်တိုင်း ၆နှစ်လုံး ပထမစွဲသူတဲ့။ သူထွက်သွားတဲ့ နိုင်ငံက သူ့အတွက် အလုံးစုံတာဝန်ယူတယ်တဲ့။ တကယ်ကို နှမျှောစရာပါ။ သူ့လို တော်တဲ့သူ တယောက်က လုပ်ခွင့်မရလို့ ရတဲ့နေရာကို ထွက်သွားတာ တိုင်းပြည် တကယ်ကို နာတာပဲလို့ အစ်ကို ခဏခဏ ပြောလို့ မှတ်မိနေတာပါ။
မိုးစက်ထက်အသက်ရော ပညာရောအစစအရာရာသာတဲ့သူတွေကြားထဲ ဝင်ပြောဖို့တော်တော်လေးစဉ်းစားလိုက်ရတယ် အမှားပါရင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ
မိုးစက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်တယ်လို့တော့ မခံယူရဲသေးပါဘူး ကြိုးစားစဲပါ
လစာက ဆယ်ဆလောက်ကွာသလို facility ကလည်းတခြားစီမို့လို့ပါ ပြည်ပကပြန်မလာနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်
ရတဲ့အချိန်လေးတွေကို မိဘမဲ့ကျောင်းတွေမှာ volunteer teacher လုပ်ပေးနေပါတယ်
(ရတဲ့အချိန်လေးတွေကို မိဘမဲ့ကျောင်းတွေမှာ volunteer teacher လုပ်ပေးနေပါတယ်)
ဒါဟာလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က နိုင်ငံတိုးတက်ရေးကို တဖက်တလမ်းကနေ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူပါတယ် မိုးစက်ရေ။
ဟုတ်တယ်နော်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကို ဆရာ ချစ်ဦးညို စင်ကာပူဟောပြောပွဲမှာ ပြောကြားပြီး အားနဲ့မာန်နဲ့ ရွတ်ဆိုသွားတာ ခုချိန်ထိ မြင်ယောင်နေတုန်းပါပဲ။
ဦး Foreign Resident ပြောသလိုပဲဗျာ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လို လူငယ်တွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်
ကျနော်ကိုယ်တွေ့ပဲ အလုပ်စလျှောက်တုန်းက အတွေ့ကြုံမရှိလို့ဆိုပြီး လျှောက်တိုင်း ပယ်ချခံရတော့ အလုပ်ကို လျှောက်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး မရှိဘူးဆိုတာကလည်း ဆယ်တန်းအောင်ခါစပဲရှိသေးတာလေ အဝေးသင်တက်ရင်း အလုပ်လုုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံလိုချင်လို့ အလုပ်လျှောက်တဲ့ လူငယ်တွေကို စီးပွားရေးသမား တွေက ဘယ်လောက်တောင် Cancel လုပ်နေတာမှန်းမမသိတာဗျာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပဲ အဲလို ခဏခဏ ဖြစ်တော့ စိတ်ညစ်ပြီး လေနေတာ4လလောက်ကြာသေးတယ် တက်ပါတယ် သင်တန်းတွေ လက်တွေ့က အလုပ်ထဲမှ အသုံးချရတာဆိုတော့ လက်မှတ်ရတာပဲ အဖတ်တင်တယ် ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး လူငယ်တွေလည်း စိတ်ကူးကိုယ်စီတော့ ရှိကြပါတယ် မိဘနဲ့ ညှိမရတာတွေ အယူအဆ မတူတာတွေကြောင့် လမ်းဘေးတွေ ရောက်နေတာတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ် လူငယ်တွေကို အဲလိုတွေ မမြင်ချင်ရင် အရင်ဆုံး လုပ်ငန်းတွေမှာ ရဲရဲ ခန့်အပ်ပြီး သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ကျမတို့ တတ်နို်င်သလောက် အားကုန် ထုတ်ပြီး ကြိုးစားမှာပါဒေါ်ဒေါ်ရယ် ………………… ဒါပေမဲ့……………………………………………………………………..
အခုထိတော့ လျှေက်သောလမ်းမှာ စမ်းတဝါးဝါးဖြစ်နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်…………..
ပြောရတာလည်း ရှက်လှပါတယ် ဒေါ်ဒေါ်ရယ်……..
ပြည်တွင်းထဲမှာmoe z တို့လိုလူငယ်တွေ
ဒီထဲကို တစ်ခေါက်ရောက်သေးတယ် စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးနဲ့ ပြန်ထွက်သွားမိတယ်
အခု တစ်ခေါက်ထပ်ဝင်လာတာ ( ဝင်ကြေးမပေးရလို့ တော်သေးရဲ့)
ဒီပို့စ် ကို ရေးတဲ့ ဒေါ်ပဒုမ္မာရဲ့ စေတနာ နဲ့ ထားတဲ့ စိတ်လေး ကို မြင်နေရတယ်
အဲဒီစိတ်မျိုးလေး မွေးဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ခင်ဗျာ
ဝေဝေ၊အောင်ကြူးPooch နဲ့မမရေ ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညံ့မှန်းသိရင်တော်လှပြီ၊ပလုံမြည်ချင်လည်းမြည်ပါစေ။
တစ်ချို့က တော်သလိုလို ဟန်ဆောင်ကြသေး။
ဒို့တွေ ဟန်ဆောင်တော်နေတဲ့ထဲ မပါတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူလိုက်မယ်လေ။
မနောပြောတဲ့ ဆရာချစ်ဦးညိုဟောပြောပွဲက DVB မှာလွှင့်သွားတာနဲ့တူတူဘဲလား၊မေလှမြိုင်သီချင်းဆိုပြီးပြောသွားတာလေ။အန်တီလည်းကြိုက်တယ်။
ရွှေဘိုသား မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မလား။အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရေးနိုင်တာဘဲ။စီးပွားရှာတဲ့ အလုပ်မှ အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ။
အသိ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဆို ကားပွဲစားလုပ်နေရာက နာရေးကူညီမှုမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ကူညီပေးလိုက်တာ အခုဆို ကိုကျော်သူက ဝန်ထမ်းခန့်လိုက်တော့ ဝါသနာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်သွားပါတယ်။
မိုးစက်ရေ သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ပါတယ် သမီးလေး။
ဒေါ်ပဒုမ္မာမှာ စေတနာနဲ့စိတ်ဘဲရှိတယ်၊ကိုဖြူ ရဲ့၊
သူငယ်ချင်း မေအေးဦး 2000 group ဆို လူရော စိတ်ရော အပင်ပန်းခံပြီး ကွက်လပ်တွေလိုက်ဖြည့်နေပါတယ်။
ရွာသားတွေကတော့ စိတ်ချင်းညီတယ်ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်တာပါ။
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမှာ မနစ်ပါဘူးတဲ့၊
မတတ်ဘဲညွှန်ကြားကြလည်း တကယ်ဘယ်သူတတ်တာလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
ပါးစပ်က ပလာစတာခွာခွင့်ရရင် အသံလည်းထွက်ခွင့်ရလာမှာပါ။
ပရော်ဖက်ဆာ မစ်စတာမောင်ပေ တစ်ယောက်လည်း တိုင်းပြည်အကျိုးပြု တဲ့
လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ ဗျာ
(မင်းသိင်္ခ ရဲ ့ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာစုတ်ဖွား လိုမျိုး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပရော်ဖက်ဆာပေးသည် )
မောင်ပေရယ် သေချာတာကတော့ တိုင်းကျိုးပြည်ပြု စာရေးဆရာကြီး မစ္စတာမောင်ပေ ဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီအခါကျ သရီးစတူးဂျက်စ က မိုး မလုပ်နဲ့တော့ပေါ့နော။
ဟုတ်ကဲ့ ပေးတဲ့ဆုနဲ ့အမြန်ဆုံး ပြည့်ရပါလို၏ ဗျာ
ကျေးကျေးပါ အန်တီ ပဒုမ်
(ခင်လို ့စတာပါခင်ဗျ )
မှီရေးပြတဲ့ အင်ဂျင်နီယာလိုလူတွေ အပြင်ရောက်ကုန်တာအများကြီးပါဘဲ။
အခုလည်း ဒို့ရွာက အရေးပိုင်မင်း၊သဂျီး၊ဦးဖော၊ကြောင်ကြီး၊ကိုသစ်မင်း၊အဘဆွေ၊ကိုရင်မောင်၊
အားလုံး အပြင်ရောက် လူတော်တွေဘဲ။
retired ပြီးရင်တော့ မြိုင်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကို လူအားငွေအား၊အကြံဉာဏ်အားလေးများပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း။
ဒေါက်တာ padonmar ကတော့လုပ်ချလိုက်ပါရောလား။
အပြင်ရောက် လူတော်တွေစာရင်းကြီး မှာ သစ်မင်း ထဲ့ထား မှားပါသည် ဒေါက်တာခင်ဗျ။
ခေတ်ရဲ့သဘောက Survivals for fittest မလို့လူရာဝင်အောင်တော့ကြိုးစားနေရတဲ့အဆင့်ပါခင်ဗျ။
ဒို့ခတ် မှ မဟုတ်တာ….
အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ သူ့သဘောနဲ့သူ ဂွင်ရိုက်ပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်နေတာပဲဥစ္စာ….
သမ္မတကြီး ကတော့ အကောင်းဘက်ကို လိုလားတယ်လို့တော့ ထင်ရတာပဲ….
ဒါပေမယ့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတွေ လုပ်ကိုင်နေပုံကတော့…..
နေပြည်တော်က ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးသိမှသိ…..
ဂွင်တွေဆင်…… အာဏာ စက်တွေ့ချဲ့….. သူဂွင်တွေ အကောင်အထည် ဖော်မယ့် တပည့်တွေမွေး….
သူ့တို့လူထည့်ချင်ရင် နဂိုလူကို အပစ်မရှိ အပစ်ရှာ….
လူရှေ့သူရှေ့ လေကြောင်တွေပစ်…… အမှန်ကတော့ အချင်းချင်း ပိုင်ဆိုင်မှု အပြိုင်အဆိုင်…..
ကောင်းတဲ့သူ ရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့ အထက်အောက် မျှမျှတတ ရှိတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ…..
Return to Burma ဆိုတာလေးတွေ့လို့ ူlink လေးပေးချင်လို့ပါ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကြည့်လို့ရတဲ့ အချိန်ကျရင် ကြည့်ခွင့်လည်းရချင်ပါတယ်။
ပင်စင်စားတွေ မေးစမ်းကြည့်သလောက်တော့.. ဦးနေဝင်းကိုတော်တော် စိတ်နာကြတာ တွေ့ရတယ်..။
ဦးနေဝင်းပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်တာ… တိုင်းပြည်သားကောင်း… လူတော်တွေ တော်တော်ကို ထိသွားတာလို့တွေ့ရတယ်..။
လက်ရှိအစိုးရက..အဲဒီမျိုးဆက်တွေကို.. လျှော်ကြေးပေး..တရားဝင်.. တောင်းပန်တာ လုပ်သင့်တယ် ထင်မိတယ်..။ ;)
ဆန်ရှင်ရုတ်လိုက်ရင်… တော်တော်များများ.. ပြန်လာလုပ်ကြမယ်လို့တော့.. ထင်တယ်..။
သာမန်လွယ်လွယ်လုပ်နိုင်တဲ့.. ယူအက်စ်ကုမ်ပဏီကြီးတွေ.. မြန်မာပြည်ကိုဆွဲခေါ်ကြမယ့် ခြေလှမ်းတွေ မြင်နေရပါတယ်..။
နေသာထိုင်သာရှိအောင်..လဝက ဥပဒေတချို့ပြင်ဆင် ထားဖို့လိုမယ် ထင်တာပဲ..။
အကုန်ပါမသွားအောင်.. နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွား.. ကာကွယ်တဲ့.. ဝံသာနုဥပဒေတချို့ ပြဌာန်းထားဖို့လည်းလိုမယ်..။
နေခေတ်မှာ ပြည်သူပိုင်ကြောင့် စီးပွားရေး ကျပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာမကျသေးဘူးသဂျီးရဲ့၊
သူတစ်ယောက်ကလွဲလို့ ဝန်ကြီးLevel တောင် အထုပ်ကြီးကြီး မပိုက်နိုင်ကြပါဘူး။
လူတန်းစား ကွာဟမှု နည်းသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တံခါးပိတ်ထားတော့ သူလည်း ချောကလက်မစားရ ကိုယ်လည်းမစားရ တူတူပေါ့။
ရွှေခေတ်ရောက်တော့မှ လူတစ်အုပ်စုက ချောကလက်စားပြီး ကျန်တဲ့လူများစုက ထန်းလျက်တောင် မှန်မှန်မစားရတဲ့ ဘဝရောက်ရတာ။
ဆိုတော့ ရှိချင်မှရှိတော့မယ့် မျိုးဆက်ကို တောင်းပန်ခိုင်းနေရင် မာနကြီးလှသော အဆက်ဆက် မင်းများက တောင်းပန်မယ်မထင်ပါ။(နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေက လာတွေ့ရင် ဂါရဝလာပြုတယ်တဲ့။သူတို့က လက်ခံတွေ့ဆုံတယ်တဲ့)
စိန်ခေတ်မှာ ပြန်လာကြဖို့ခေါ်တဲ့ စကားတောင် စကားအသုံးအနှုန်း မကျေနပ်ကြလို့ အသံတွေထွက်နေကြတာလေ။
ပြောရရင် ကျွန်မ တို့ဟာ ပြာပုံထဲက ရုန်းထရမယ့် အခြေအနေပါ။ဂျပန် စစ်အပြီးမှာ ပြာပုံထဲက ထရတယ်လို့ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ဘဲလိုပါတယ်။
US company ,UK,Japan ,…တော့မသိဘူး ၊ကိုးကန့် တွေ ဝ တွေကတော့ တော်တော်ရောက်နေပြီ။မြေတွေတောင်ဝယ်ပြီးကြပြီ။
ပြင်သင့်တဲ့ ဥပဒေတွေ ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ သဂျီးပြောတဲ့ နိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးမယ့် ဝံသာနု ဥပဒေတွေ အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေကိုမျှော်တာပေါ့၊
ဒီအချိန်မှာ အစိုးရသစ်ကလည်း ပြုပြင်ပေးချင်ပေမယ့် အတွေ့အကြုံတွေက မျက်စိပိတ် ပါးစပ်ပိတ်ခံထားရတာကြာတော့ ဝိုးတိုးဝါးတား စကားမပီ့တပီဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် အတွေ့အကြုံလည်းရှိ၊ပြည်ချစ်စိတ်လည်းရှိမယ့် Think Tank တွေကို
ကိုပေါက်ပြောသလို ရွာကိုပြန်လာကြပါဗျိုး လို့ ဟစ်လိုက်ချင်ပါတယ်။
ပင်စင်စားတွေဆိုတာ.. မြန်မာပြည်က ၆၂-၇ဝ နောက်ပိုင်း ထွက်လာကြတဲ့.. ယူအက်စ်ရောက်အလုပ်လုပ်.. ပင်စင်ယူသွားသူတွေပြောတာပါနော..။
ပြောရရင်.. အဲဒီမျိုးဆက်တွေထဲက တယောက်ကြောင့်ပဲ.. မြန်မာပြည်အင်တာနက် ရနေတာ..။
“ဒီအချိန်မှာ အစိုးရသစ်ကလည်း ပြုပြင်ပေးချင်ပေမယ့် အတွေ့အကြုံတွေက မျက်စိပိတ် ပါးစပ်ပိတ်ခံထားရတာကြာတော့ ဝိုးတိုးဝါးတား စကားမပီ့တပီဖြစ်နေတယ်။”
အဲဒီစကားနဲ့အဲဒီသဘောထားတကယ်ဖြစ်ပါစေ၊ မှန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
Time is judge ပေါ့နော်။မှန်မမှန် သိလာရမှာပါ။
ကန်ထရိုက်ယူထားရရှာတဲ့ မြန်မာပြည်သားအပေါင်းကိုရောပေါ့ဗျာ …..
စနစ်/ဝါဒ ရဲ့ သားကောင်(Victims of System/-ism) ဘဝတွေကနေ လွတ်စေချင်လှပါပြီ။
အားလုံးကို FR ကတော့ သူ့အလုပ်သူကြေငြာထားလို့သိတာကလွဲရင် ဘယ်သူ ဘာအလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေဘယ်လောက်လို့ မသိပါဘူး။
ကျွန်မတိုင်းတာတဲ့ လူတော်က ဗဟုသုတ၊နဲ့ စေတနာ အရာမှာ တော်တာကိုပြောချင်တာပါ။
ဒါကြောင့် လူတော်စာရင်းကနေ ပြန်ခုန်မချပါနဲ့။ဆွဲထားပါရစေ။
တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အစိုးရကိုယ်စား ကျွန်မတို့လို အင်တာနက်ယူစာတွေကဘဲ ကျေးဇူးတင်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
Padonmar ရေ စိတ်မပူပါနဲ့ (1962- 1988)မတိုင်ခင်ကြားမှာ Generation Gap ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတော်
တော်များများတို့ ရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ သည်ကိစ္စကိုမတားနိုင်လို့သူတို့တားနိုင်တဲ့ တပ်ကို ပဲ တို့အားလုံး နဲ့ရော
တပ်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပါ Generation Gap ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတာ ဒါမှ သူတို့ထွက်ပေါက်ရမှာလေ၊
( တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ ဆိုတာ အဲသည်အဓိပ္ပါယ်ပဲ ) ၊ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းဆိုတာရေရှေ ဖျောက် ဘို့မလွယ်ပါ၊ ခုပဲ တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေ ပြည်သူကြားမှာမားမားစွင့် စွင့် နေရာယူလာပြန်ပြီမဟုတ်လား ၊ တရားဝင်ကိုပြန်ပေါ်လာတာ၊ ပြည်ပရောက်ပညာ ရှင်တွေ ရော တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပါ ခုဆို အွန်လိုင်းတွေ၊ နက်ဝပ်တွေ ကတစ်ဆင့် Gap မဖြစ်အောင် ချိတ်ဆက်နှီးနှောဖလှယ်နိုင်နေပါပြီ၊ တို့ မလုပ်နိုင်သေးတာ တပ်နဲ့ ပြည်သူကြားပြတ်နေတဲ့၊ဖြတ်ထားခံရတဲ့ Gap ပါပဲ။အဲဒါလုပ်နိုင်ရင်—- တို့တစ်တွေအရာရာအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ပြည်သူလိုလားတဲ့၊ ခေတ်မှီ တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ဘို့ လမ်းစတွေ တစ်သီကြီးဆက်တိုက်လာပါလိပ်မည်။ Key Player ကိုသိဘို့လိုပါ၏။
ပြောင်းဘို့အတွက် unity အရေးကြီးပါသည်၊ ခုခေတ်လူငယ်တွေ မညံ့ကြပါ၊ရူးချင်ယောင် ဆာင်နေကြပါ သတည်း။